Archive du 03/03/2012
Raha mbola resaka ny hoe hiakaran�ny vidin-tsolika tamin�ny fiandohan�ny herinandro teo dia nihatra nanomboka omaly maraina io fisondrotam-bidy io ho an�ny teto Antananarivo Renivohitra, raha efa nialoha lalana ny tany amin�ireo tan�n-dehibe sasany ivelan�ny renivohitra.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Famatsiam-bola ny FAT
Hitsivalanan�ny Amerikanina tanteraka
Mitsivalana tanteraka amin�ny hamerenan�ny Banky Iraisam-pirenena ny fitondrana tetezamita, famatsiam-bola ny fanjakana Amerikanina.
Mpandala ny ara-dal�na
Ny sori-dalana ihany
�Tsy misakana izay Malagasy mitady vahaolana fa raha manohintohina ny fiverenan�ny filoha Marc Ravalomanana izany dia tsy mety aminay�, hoy i Fanantera Longin omaly tetsy amin�ny kianjan�ny Magro Behoririka.
Minisitra Manantsoa Victor
�Hamorona krizy vaovao indray izany sori-dalana hafa izany�
Efa miasa daholo ny mpiasa rehetra ao amin�ny ministera misahana ny fifandraisana amin�ny andrimpanjana (MERI) fa tsy misy mitokona intsony, hoy ny minisitra Manantsoa Victor.
Navoaka i Jao Jean
Mihorohoro sahady Antsohihy
Nihazakazaka ny raharaha politika ao Antsohihy ao tato anatin�ny tapa-bolana izao.
Noho ny toe-draharaha misy eto amin�ny firenena tato ho ato amin�ny fisian�ny fiezahana manakorontana ny sain�ny vahoaka hoe ravao ny tondrozotra vita sonian�ny ankolafy rehetra miaraka amin�ireo hevitra maro hanapotehana ny ezaka efa vita teo amin�ny fanatanterahana azy, dia mahatsiaro ho manana adidy izahay parlemantera TGV, hoy ny mpitondra teniny Tinoke Roberto omaly teny Tsimbazaza raha nitafa tamin�ny mpanao gazety, fa mampalahelo ny vahoaka malagasy amin�ny zava-misy mahazo azy.
�Tsy mahagaga ny fahabangam-bola ao�, hoy Randriamahefa Charles
Nanao fanambarana ireo CT sasany avy any Moramanga fa hoe ratsy tantana ny orinasa Fanalamanga amin�izao fitantanan�ny ADG Fran�ois azy izao.
Tsy ahoako loatra ry Jean fa dia ho malilo mihitsy isika, ianao amin�ity resaka baolina kitra sy fanatanjahantena amin�ny ankapobeny ity.
Grevin'ny mpiasan'ny ala
Amin'ny alatsinainy mifankahita !
Tsy nahazo valiny mahafa-po avy amin'ny tompon'andraikitra sy ny manampahefana ireo mpiasan'ny ala koa dia niroso ho amin'ny fitokonana faobe nanomboka omaly.
Notoloran�ny FAT mariboninahitra
Ireo olona mendrika sy nahavita zavatra teo amin�ny firenena no tolorana mariboninahitra tahaka izao, hoy ny Lehiben�ny mariboninahi-pirenena Ralitera Etienne omaly teny amin�ny Lapan�i Tsimbazaza nandritra ny fanolorana ny anjaran�ireo mpiasa miisa 170 ao amin�ity Kongresy ity.
Miha mafy hatrany ny krizy ary manampy trotraka izany ny fisondrotan�ny solika, izay azo antoka fa tahaka ny menaka raraka amin�ny taratasy ka hiparitaka sy hiteraka zavatra hafa maro.